Thermoelectric solar simba: maitiro, mashandisirwo uye kukosha | Green Renewables
Thermoelectric simba rezuva
La thermoelectric simba rezuva o Solar thermal inyanzvi inoshandisa kupisa kwezuva kugadzira magetsi. Iyi nzira inoitika mune izvo zvinonzi solar thermal power plant, kana solar thermal power plant, iyo yakatanga kuvakwa muEurope neJapan mukutanga kwema 80. Kubatsira kwesimba iri ndeyokuti yakachena, yakawanda uye inogona kuvandudzwa. : Mazuva gumi ega ega, Nyika inogamuchira kubva kuzuva simba rakafanana nerese anozivikanwa matura eoiri, gasi nemarasha. Parizvino, marudzi akati wandei e thermoelectric solar power plant anogara. Spain iri munzvimbo ine mukana mundima iyi, sezvo iine akati wandei solar zvidyarwa uye yakasimba maindasitiri chikamu, inotora chikamu mumapurojekiti pasi rese.
Muchinyorwa chino tichakuudza nezve maitiro uye kukosha kweiyo thermoelectric solar energy.
1 Chii chinonzi thermoelectric solar energy
2 Mhando dzemiti
2.1 Solar thermal tower chirimwa
2.2 Parabolic dish kana Stirling dish solar thermal power plant
3 Kuvandudzwa kwesimba rezuva re thermoelectric
4 Thermoelectric solar simba muSpain
Chii chinonzi thermoelectric solar energy
A solar thermal power plant inoshanda semagetsi emagetsi, asi panzvimbo pemarasha kana gasi rechisikigo, rinoshandisa simba rezuva. Mwaranzi yezuva inonangana nemagirazi ari mumudziyo, inosvika tembiricha inosvika 1.000 ºC. Kupisa uku kunoshandiswa kupisa zvinwiwa uye kugadzira chiutsi, chinotyaira maturbine uye kugadzira magetsi. Nepo zvidyarwa zvekutanga zvaingoshanda mukati memaawa emwaranzi yezuva, nhasi kupisa kunogona kuchengetwa kuti kuite husiku.
Parizvino kune marudzi matatu makuru emagetsi emagetsi ezuva. Kugadzirwa kwemagetsi kwakafanana, mutsauko ndewekuti simba rezuva rinoiswa sei.
Solar thermal tower chirimwa
Inoshandisa seti yezvionioni zvinodzoreka, zvinonzi heliostats, kutarisa miranzi yezuva pane vanogamuchira vari pashongwe. Mukati menguva yepakati, itekinoroji yakaratidza, inoshanda uye ine pundutso. Zvigadzirwa zvekutanga zvemhando iyi zvakavakwa muAlmería (Spain) uye Nio (Japan) muna 1981. Dambudziko riripo nderokuderedza mutengo wekuvaka weshongwe yezuva rinopisa magetsi.
Parabolic dish kana Stirling dish solar thermal power plant
Ichi chirimwa chemagetsi chinopisa chezuva chinoshandisa dish-shaped parabolic mirror kuti itarise maranzi ezuva paStirling engine panzvimbo yeparabola, saka inonziwo central Stirling disk. Kupisa kwakaunganidzwa kunokwidza tembiricha yemhepo, iyo inotyaira iyo Stirling injini neturbine kugadzira magetsi. Iyo inonyanya kuzivikanwa parabolic dish chirimwa ndiyo iri kuMojave (United States).
Aya marudzi emiti ndiwo anonyanya kuvimbisa kubva pakuona kwekutengeserana. Vaishandisa girazi muchimiro chesilinda yeparabolic ine mugero paakiso yaro inonangidzira mwaranzi yezuva. Iyo pombi ine mvura inodziya uye inoburitsa chiutsi chinotyaira turbine. Parabolic trough solar thermal plant inoshanda muSpain nedzimwe nyika.
Kuvandudzwa kwesimba rezuva re thermoelectric
Izvo zvakakosha zvesimba rekupisa kwezuva zvakatsanangurwa naAugustin Mouchot muna 1878, uye muma1980 chimwe chiitiko chakaratidza kugona kwayo. Kusvikira munguva pfupi yapfuura, zvisinei, simba rezuva rinopisa rakakanganiswa nezvinhu zvitatu:
Kudhura kwezvinhu yakatanga kudzikira sezvo tekinoroji yakasimukira uye goho rakawedzera.
Hazvibviri kuchengetedza simba kuti rigadzire usiku hwose. Kuganhurirwa uku kuchangotanga kukundwa nemichina inochengetedza kupisa. Semuenzaniso, chirimwa cheGemasolar muSeville chinoshandisa munyu wakanyungudutswa kuchengetedza kupisa. ndosaka yave yekutanga solar thermal power plant inokwanisa kupa simba maawa makumi maviri nemana pazuva.
Kuwanda kwemwaranzi yezuva kunodiwa mugore rose, izvo zvinoganhurira kuiswa kwesimba iri munzvimbo dziri kumaodzanyemba. Nekudaro, mapurojekiti aneshungu akaita seDesertec anokurudzira kumisa mafekitori munzvimbo dzakaita serenje reSahara vozotumira magetsi kuEurope.
Mapurojekiti mazhinji esimba remagetsi ezuva ari kuvandudzwa munyika dzakaita seAlgeria, Morocco, United States kana Australia. Vazhinji vaiva nechiSpanish chakabatanidzwa.
Thermoelectric solar simba muSpain
Spain isimba repasi rose musimba rinopisa rezuva. Mamiriro ezvinhu enyika akanakira kuiswa kwemagetsi emagetsi ezuva nekuda kwemaawa akawanda ezuva uye nzvimbo dzayo huru dzerenje. Zvidyarwa zvekutanga zvekutyaira, zvinonzi SSPS/CRS uye CESA 1, zvakavakwa muTabenas (Almería) muna 1981 na1983, zvichiteerana.
Muna 2007, yekutanga yekutengesa PS10 tower solar thermal plant munyika yakatumirwa muSanlúcar la Mayor (Seville). Muna 2011, zvidyarwa makumi maviri neimwe zvine simba re21 MW zvaive kushanda uye imwe makumi mana muchirongwa, maererano neProtermosolar, mubatanidzwa weSpanish weiyo solar thermal industry. Kana zvese izvi zvinomera zvitsva zvatanga kushanda, kunosvika 2014, Spain ndiyo ichave inotungamira pasi rose mugadziri weiyi inovimbisa 100% yakachena uye inovandudzwa simba sosi.
Mafomu: Mvura yakachena inopisa, kudziyisa, air conditioning uye kudziyisa dziva rekutuhwina. Mudzimba dzemhuri imwe chete inogona kuvhara kusvika ku70% yemvura inopisa inoshandiswa.
Kushanda: Thermal plates ibasa rekuunganidza mwenje wezuva uye kuendesa kupisa kune zvinwiwa zvinotenderera kuburikidza nazvo.
Regulations uye rubatsiro: Iyo Technical Building Code (CTE) yakabvumidzwa muna 2006 inoda kuiswa kwema solar panels muzvivakwa zvese zvitsva. Rubatsiro rweHurumende nedunhu runogona kuvhara chikamu chimwe chete muzvitatu kusvika pahafu yemitengo yekuisa.
Mari uye kuchengetedza: Avhareji mutengo wekuisirwa 2 square metres ingangoita 1.500 euros emvura inopisa. Kuenzaniswa negasi rechisikigo kana propane boiler, simba rekuchengetedza iri € 150 / gore, uye kana fossil mafuta nemagetsi zvichiramba zvichikura, kuchengetedza kwesimba kuchave kwakanyanya. Pasina rubatsiro, nguva yekubhadhara ingangoita makore gumi, nerubatsiro, zvinongotora makore mashanu.
Thermoelectric solar energy zvakare ine maapplication mukati memba. Ngationei kuti ndezvipi:
Chikumbiro: Kugadzirwa kwesimba remagetsi rekushandisa mudzimba kana rekutengesa kune general network.
Kushanda: Photovoltaic panels inoshandura mwaranzi yezuva kuita magetsi.
Mitemo uye rubatsiro: Makambani emagetsi anodiwa zviri pamutemo kutenga grid-yakabatanidzwa photovoltaic simba, kubhadhara mutengo kune vanogadzira (ikozvino 575% yemutengo pa kilowatt). Kune rimwe divi, iyo tekinoroji yekuvaka makodhi inoda kuiswa kwe photovoltaic mapaneru mune chero yeruzhinji kana yakavanzika chivakwa chinodarika 3.000 square metres.
Mari uye kuchengetedza: Kuti uzvipe wega, mutengo wediki 5 kW unit inotenderedza 35.000 euros. Tichifunga kuti kushandiswa kwesimba kwepagore kweavhareji imba kwakatenderedza 725 euros, mari yacho haina kuderedzwa kusvika mushure memakore makumi mana nemasere.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezve thermoelectric solar energy uye maitiro ayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Green Renewables » Renewable simba » Thermal zuva simba » Thermoelectric simba rezuva
Carlos Sintora Cue akadaro
"Tichifunga kuti kushandiswa kwesimba kwepagore kweavhareji yemba kwakatenderedza 725 euros, mari yacho haibhadhare pachayo kusvika mushure memakore makumi mana nemasere." Ichi chirevo chaunotaura mukubvisa kwe48Kw midziyo inoita seisina kunaka kwandiri. Ndatenda
Pindura kuna Carlos Sintora Cuè
Chii chinonzi ecotourism
chii chinonzi megawatt